Admin - Khoj Network
विभिन्न कुराको जानकारीको सँगालो।
रमाइलो राजनीति: अन्ततः माधव नेपाल एमालेमा र प्रचण्ड माओवादी केन्द्रमा फर्किने।
March 8, 2021 March 8, 2021 AdminLeaveaComment on रमाइलो राजनीति: अन्ततः माधव नेपाल एमालेमा र प्रचण्ड माओवादी केन्द्रमा फर्किने।
नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले अब आफ्नै पूर्वपार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै फर्किने गरी निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार नेता माधवकुमार नेपालसहित पूर्वएमाले नेताहरु एमालेमै फर्किने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी केन्द्र नै ब्युँताउने तबरले अघि बढ्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार […]
सुदिप लामिछाने भन्छन् ‘रोज्दैछु’।
February 25, 2021 May 14, 2021 AdminLeaveaComment on सुदिप लामिछाने भन्छन् ‘रोज्दैछु’।
सुदिप लामिछानेले आफ्नो पहिलो गीत ‘रोज्दैछु’ सार्वजनिक गरेका छन्। साहित्यमा रुचि राख्ने उनले आफ्नो पहिलो गित रोज्दैछु सार्वजनिक गर्दै संगीत क्षेत्रमा पाइला राखेका हुन्। साहित्यमा सक्रिय उनले गजल, मुक्तक जस्ता धेरै साहित्यिक रचनाहरु लेखिसकेका छन्। उनका ती रचनाहरुलाई हजारौंले मन पराएका छन्। गोरखा जिल्लामा जन्मिएका सुदिप लामिछाने हाल काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्। उनको गीतको शब्दहरु यसप्रकार […]
एक महिलाले आफ्नो कुखुरा बचाउनको लागि गरिन् बाह्र लाख खर्च।
February 10, 2021 February 10, 2021 AdminLeaveaComment on एक महिलाले आफ्नो कुखुरा बचाउनको लागि गरिन् बाह्र लाख खर्च।
मानिसले आफुलाई मन परेको जीव बचाउनको लागि जतिसुकै रकम पनि खर्च गर्न सक्छन् भन्ने कुरा एक महिलाले गरेको कार्यबाट थाहा हुन्छ। उक्त महिलाले आफ्नो कुखुरालाई बचाउनको लागि $10,000 अर्थात् लगभग नेपाली बाह्र लाख रुपैयाँ खर्च गरेकि छिन्। उक्त महिला अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्ने सेलेता नोथनागेल हुन्। उनको कुखुराको स्वास्थमा समस्या देखिएपछि परिक्षण गर्दा मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने […]
कैलाश पर्वतको रहस्य जानेर बैज्ञानिक भए हैरान! के यहाँ शिव अझै जिवितै छन्?
February 2, 2021 February 2, 2021 AdminLeaveaComment on कैलाश पर्वतको रहस्य जानेर बैज्ञानिक भए हैरान! के यहाँ शिव अझै जिवितै छन्?
कैलाश पर्वत तिब्बतमा अवस्थित छ। यसको उचाई ६६५६ मिटर रहेको छ। हिन्दुहरुले कैलाश पर्वतलाई भगवान शिवको वासस्थानको रुपमा विश्वास गर्छन्। यो धार्मिक दृष्टिकोणको हिसाबले हिन्दु,बौद्ध,जैन धर्मावलम्बीको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कैलाश पर्वतको उचाई एकदमै धेरै नभएपनि यसको शिखरमा आजसम्म कोहिले पनि पाइला राख्न सकेका छैनन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आजसम्म हजारौंले पाइला राखिसके […]
चकित पार्ने गरी यि व्यक्तिहरुसँग मात्रै यति धेरै पैसा।
January 31, 2021 January 31, 2021 AdminLeaveaComment on चकित पार्ने गरी यि व्यक्तिहरुसँग मात्रै यति धेरै पैसा।
तपाई विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरुको आम्दानी थाहा पाउँदा चकित पर्नुहुनेछ। १०. विश्वको दसौं धनी व्यक्ति Sergay Brin हुन्। उनी गुगलको Co- Founder हुन् । उनको Networth $77 billion dollars रहेको छ। ९. विश्वको धनी व्यक्तिको नवौं स्थानमा रहेका छन् Larry Page। उनी पनि गुगलको Co- founder हुन् । उनको Net Worth $79.2 billion dollars रहेको […]
अमेजन जंगल: एक रहस्यमय ठाँउ।
January 24, 2021 January 24, 2021 AdminLeaveaComment on अमेजन जंगल: एक रहस्यमय ठाँउ।
अमेजन जङ्गलमा एउटा यस्तो नदि छ त्यो नदिको पानी बाट सधैं बाफ आउने गर्दछ। यो एउटा अनौठो रहस्यमय कुरा हो। नदिमा उम्लिएको पानी बग्नु भन्ने कुरा एउटा सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। कुरा हो। नदिमा उम्लिएको पानी बग्नु भन्ने कुरा एउटा सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। यस जङ्गलमा धेरै संख्यामा फरकफरक आदिबासीहरुको बसोबास रहेको छ। कतिपय आदिबासीहरु […]
मानिसले दिमागमा सोचेको कुरा कम्प्युटरले गर्ने प्रविधि।
January 24, 2021 January 24, 2021 AdminLeaveaComment on मानिसले दिमागमा सोचेको कुरा कम्प्युटरले गर्ने प्रविधि।
एलोन मस्कलाई आइरन म्यान पनि भन्ने गरिन्छ। फोर्ब्सका अनुसार उनी अहिले विश्वकै धनी व्यक्ति हुन्। उनको कुल सम्पत्ति 201 Billion Dollar रहेको छ। मस्क टेस्ला,नेउरालिङ्क,स्पेस एक्स जस्ता कम्पनीको मालिक हुन्। मस्कद्वारा स्थापित नेउरालिङ्क कम्पनीले मष्तिस्क र कम्प्युटरलाई जोडेर विभिन्न अद्भुत कार्य गर्ने प्रबिधिको विकास गरिरहेको छ। केहि समय अघि सुँगुरको मष्तिस्कमा चिप राखेर एउटा रोगको […]
एउटा यस्तो भिडियो जसमा विश्वको जनसंख्या भन्दा बढि views रहेको छ।
January 24, 2021 January 24, 2021 AdminLeaveaComment on एउटा यस्तो भिडियो जसमा विश्वको जनसंख्या भन्दा बढि views रहेको छ।
Youtube मा थुप्रै भिडियोहरुमा अरबौं views रहेको छ। अहिले Youtube मा सबैभन्दा धेरैपटक हेरिएको भिडियो ‘बेबि शार्क डान्स’ हो। यो साना बालबालिकाको लागि बनाइएको गित हो। अहिले विश्वको जनसंख्या सात अरब असि करोड भन्दा बढि रहेको छ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने यो गितमा 7.8 Billion अर्थात् सात अरब असि करोड भन्दा बढि Views […]
सर्वाधिक कमाई गर्ने नेपाली पाँच चलचित्रहरु कुन् कुन् हुन् त? यो हेर्नुहोस्।
January 24, 2021 January 24, 2021 AdminLeaveaComment on सर्वाधिक कमाई गर्ने नेपाली पाँच चलचित्रहरु कुन् कुन् हुन् त? यो हेर्नुहोस्।
नेपालमा बनेका चलचित्रले दर्शकको मन जित्न सफल भएमा धेरै नै आम्दानी गर्ने गर्दछन्। सर्वाधिक कमाई गर्ने पाँच नेपाली चलचित्रहरुको सुची यस्तो छ। ५.लुट २यो नेपालमा बनेको एक उत्कृष्ट चलचित्र हो। यो लुटको सिक्वेल हो जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको थियो। यो चलचित्रलाई निकै क्षमतावान् व्यक्ति निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन्। यो चलचित्रको कमाई […]
आजको राशिफल। मिति: ११ माघ २०७७, आइतवार
January 24, 2021 January 24, 2021 AdminLeaveaComment on आजको राशिफल। मिति: ११ माघ २०७७, आइतवार
मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज प्रतिष्ठित काम गरेर अवसर हात पार्ने समय छ । वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) आज घरायसी समस्या बढ्नेछ । सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा चिसोपन देखिन सक्छ । […]
भर्खरै गरिएका पोष्टहरु
©Khoj Network All Rights Reserved.	| Theme: News Portal by Mystery Themes.